Isbadelkii ku yimid habkii go’aan qaadashada Madaxweynihii Mareykanka John F.Kennedy: Qaybti 2-aad | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
“Tell me about the decision process you used?” waxaad wax iiga sheegtaa habka go’aan qaadashada aad adeegsatay ?
Su’aalaha Madaxweyne Eisenhower waxaa ka muuqatay in habka “process” ka go’aan qaadashada iyo wadatashiga, ay uga muhiimsantahay go’aanka la qaatay iyo xeeladaha “tactics”-ka la xushay. jawaabaha uu bixiyey Madaxweyne Kennedy lama xusin. laakiin Madaxweyne Kennedy marka uu ka soo noqday kulankii uu la yeeshay Madaxweyne Eisenhower, waxaa uu madaxweyne Kennedy isugu yeeray kooxdiisa wuxuuna warsaday sidee u wanaajin karnaa habka aan go’aanka u qaadano?. Wuxuu kale uu madaxweyne Kennedy su’aalay kooxdiisa sidii ay u wajihi lahayeen go’aanada culus ee arrimaha dibadda, ee saameynta weyn ku leh danta dalka mareykanka, si aysan mar kale u dhicin qaladaadkii ka ka dhashay go’aanada duullaankii lagu taagerayey mucaaradka Cuba ee “Bay of Pigs”.
Aroortii hore ee October 16, 1962. Madaxweyne Kennedy waxaa loo sheegay in sawirro ay soo qaadey diyaarada Maraykanka ee qaada sawirada basaasnimada ee loo yaqaan “Spy Plane”, ayaa waxaa loo sheegay in ay u muuqatey in gantaalada nukliyeer Ruushka ay yaalaan Cuba. Saacado yar ka dib CIA-da ayaa Madaxweyne Kennedy soo hordhigay Sawiro muujinaayo gantaalo nukliyeer ah iyo dhismaha saldhigyo gantaal oo laga dhisayo dalka Cuba. Kooxdii Madaxweynaha Kennedy la joogtay maalinkaa October 16 markii sawirada la tusay intooda badan waxaa ay si joogto ah u kulmayeen 16 ilaa iyo 28 October, kooxdan ama guddigaan waxaa loogu magac daray “ExComm” oo ah magac laga soo gaabiyey “The Executive Committee of the National Security Council”, oo u taagan Guddiga Fulinta ee Golaha Amniga Qaranka. Guddiga ExComm waxaa ay inta badan ku kulmayeen si qarsoodi ah qoalalka shirarka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qol ka mid ah.
Madaxweyne Kennedy iyo La-taliyayaasha badankood markii horey waxay qabeen in talaabada kaliya oo u banaan, ay tahay weerar militari oo xagga cirka ah lagu qaadayo saldhigyada Cuba ku yaal oo ay gantaalada yaalaan. Madaxweyne Kennedy wuxuu faray Robert Kennedy in Guddiga “ExComm” ay u soo “bandhigaan “Multiple options” fikrado badan oo kale duwan, waxayna u badantahay madaxweynaha in uu diidanaa in hal fikrad lagu shaqeeyo sida qaladaadkii ka curtay go’aanada duulankii lagu taagerayey mucaaradka Cuba ee “Bay of Pigs”.
Ugu danbeyntii Guddiga ExComm waxaa ay la kulmeen Madaxweyne Kennedy. Wasiirka Gaashandhiga McNamara wuxuu u soo bandhigay fikir ah “Naval blockade” in dhammaan Jaziirada Cuba xaga badda laga xanibo, xanabaadaasna ay fuliyaan ciidanka badda mareykanka. Guddiga Wadajirka Taliyayaasha Maraykan “The Joint Chiefs of Staffs” waxay soo bandhigeen “Air strikes”. duqeeynta xaga cirka, ayada oo la bartilmaamedsanayo saldhigyada ciidanka ay gantaalada ku sugan yihiin. Madaxweyne Kennedy ayaa si fiican u dhageystay doodaha labada dhinac, sidoo kale labada dhinac waxaa u waydiiyey su’aalo aad u fara badan oo adag. wuxuu weydiiyaa su’aalo badan oo adag. Ugu danbeyntii Madaxweyne Kennedy waxaa u doortay in uu qato fikirka Wasiirka Gaashandhiga McNamara ee ahaa “Naval blockade” in dhamaan Jaziirada Cuba xaga badda laga xanibo, xanabaadaasna ay fuliyaan ciidanka badda Mareykanka iyo in lagu lamaaniyo wadahadal diblomaasiyadeed lagu xoojiyo Qaramada midoobay isla markaana wada hadal toos ah lala yeesho dawladda Ruushka.
HADABA, WAA MAXAY TILMAAMAHA HANNAANKA GO’AAN QAADASHADA TAYADA LEH?
Janis ayaa waxaa uu darasaadkiisa ku sheegay tilmaamaha lagu garan karo hannaanka go’aan qaadashada tayada leh, waxaa uuna ku soo koobay qodobada hoos ku xusan oo ah kuwa looga hortagi karo caqabadaha “Groupthink”
“Multiple alternatives” ama “Multiple options” oo ah in la helo fikrado badan oo kala duwan si ay u bataan fursadaha xalka lagu heli karo, tusaale ahaan Madaxweyne Kennedy wuxuu faray Robert Kennedy in Guddiga “ExComm” ay u soo “bandhigaan “Multiple options” fikrado badan oo kale duwan, waxayna u badantahay madaxweynaha in uu diidanaa in hal fikrad lagu shaqeeyo sida qaladaadkii ka curtay go’aanada duullaankii lagu taagerayey mucaaradka Cuba ee “Bay of Pigs”.
Previous articleKulan diiradda lagu saaray kordhinta xarumaha sheybaarka Qaranka oo Muqdisho lagu qabtay
Next articleCiidamada xoogga dalka oo weerar ku qaaday saldhig maleeyshiyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Hiiraan